Splot, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Kana zuva reKisimusi rapfuura, tinodzokera kumutoro kuratidza mumwe mutambo uyo kwenguva yakati wandei yatinogona kurodha mahara. Slot, mutambo wepuratifomu uko protagonist iri diki uye inosetsa mutorwa uyo amhara pane yekumhanyisa kumhara pane imwe nyika isingazivikanwe kwaanofanira kutanga basa rekununura huwandu hweVana Vacheche kubva mukutyisidzira kunotyisa: vanhu vazhinji vane nzara uye madzimambo mukanyiwa. Slot ine yakajairwa mutengo we0,99 euros, asi kwenguva yakati wandei tinogona kuikanda pasina muripo kuburikidza neiyi link yandinokuratidza panoperera chinyorwa ichi.
Uyu mutambo wepuratifomu unotipa anosvika makumi mashanu nenhanhatu mazinga akaparadzirwa munzvimbo nomwe dzakasiyana, imwe neimwe ichinetsa, matiri tichafanirwa kufambira mberi nekusvetuka, kubhowa, kunzvenga zvipingamupinyi zvine njodzi ... zvakare apo patinofambira mberi padanho, hunyanzvi hwedu hunowedzera ndiko kuoma kwemutambo. Slot inoshandurwa zvakazara muchiSpanish uye inoda zvirinani kuti iOS 6.1.3 ishande.
1 Splot ficha
2 Splot zvinodiwa
Outsmart iyo Hungry Dough Kings uye ununure vari pangozi Macheche Chick.
Yechimurenzi yekubata zvekubata zvine kusimba kunyatsoita; Bhururuka pamwe nezvipingamupinyi zvine njodzi: spikes, lava, lasers, masuo uye zvimwe zvakawanda.
Simudza uye wedzera hunyanzvi hwako nekukwidziridzwa kwakasimba seMagnet, Freeze, uye Void.
Unganidza zvidimbu kubva kune yakachengeteka uye vhura zvinopfuura zana nemakumi mashanu Splots.
Ongorora nyika nomwe dzakasiyana: Runyararo Fairy Sango, inonyengera Space Station, inotyisa Haunted Castle uye nezvimwe kuti iwe uwane.
Enda nematanho anokwana makumi mashanu nenhanhatu anonakidza ane madhigirii matatu ekuomerwa anozoisa hunyanzvi hwako hwese.
Kuti tinakidzwe neSplot tinoda inosvika mazana matatu nemazana mashanu emamiriyoni maMB MB mahara pachigadzirwa chedu. Splot inotsigirwa senge yeIOS. 350 uye isu tinogona kutamba zvakananga kubva kune yedu iPhone, iPad kana iPod touch.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Splot, yemahara kwenguva shoma